आदेश को वित्तपोषण को मतलब छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki अर्डर वित्त
शब्द क्रम को वित्तपोषण द्वारा के मतलब छ?
मर्न अर्डर वित्त जस्तै नाम भनेको कम्पनी द्वारा प्राप्त आदेश को वित्तपोषण को लागी हो। यो विशेष गरी माल र सामग्री को वित्तपोषण को बारे मा छ। आदेश को वित्तपोषण द्वारा बनाईएको ताजा तरलता कम्पनी को कम्पनी को ठूलो आदेश स्वीकार गर्न को लागि या एक ही समय मा एक ठूलो संख्या को स्वीकार गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यो विकल्प विशेष गरी मध्य आकारको कम्पनीहरू द्वारा विचार गरिन्छ। तर ठूला कम्पनीहरूले पनि यस विकल्पलाई पूर्व-वित्त ठूला परियोजनाहरू सक्षम गर्न भागमा प्रयोग गर्छन्। एक सामान्य वित्तपोषण को अंतर यहाँ वस्तुहरु मा वित्त पोषित छन्। किनकि एक अर्डर फाइनान्सिंगमा सामान्यतः उपभोग्य वस्तुहरू वा सामानहरू जुन ग्राहकमा उपलब्ध छ। यसकारण, वस्तुहरू वित्तपोषण गर्ने कुरा होइन जुन एक निश्चित समकक्षको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
फ्यानहरू कहाँ छन्?
अर्डर को वित्तपोषण को लाभ एक जस्तै हो परिवर्तनीय बन्धन फेरि, विशेष गरी ब्याज दरमा। नियमको रूपमा, ब्याज दरहरू सामान्य छुट दायरामा छन्। यसैले, यो एक बैंक द्वारा एक बराबर ब्याज को लागी एक मानक ब्याज दर राम्रो हो। यसबाहेक, भुक्तानीको लागि शब्द अलग चयन योग्य छ। किनभने यहाँ यो पनि वित्त पोषण गर्न सम्बन्धित क्रम मा पनि निर्भर गर्दछ। प्रत्येक अर्डरको लागि एक विशिष्ट टाइम विन्डो परिभाषित गरिएको छ। निस्सन्देह, यो पनि सम्बन्धित वित्तपोषण को पुनर्जन्म हो। निस्सन्देह, यो आदेशको संख्याको कारण फरक हुन सक्छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ। यदि यो मामला हो कि अर्डर को वित्तपोषण को लागी केवल एक आदेश प्रयोग गरिन्छ वा योग्य छ, टाइम विन्डो धेरै स्पष्ट परिभाषित गर्न सकिन्छ। यदि अर्डर फाइनान्सिंग धेरै अर्डर को वित्तपोषण हो भने मलाई विभिन्न कारकहरु मा समय विन्डो को अभिमुखीकरण गर्नु पर्छ। आदेश क्रम लम्बाइ अर्डर गर्न फरक हुन सक्छ किनकि, सबैभन्दा ठूलो समय सन्झ्याल सामान्य रूपमा मानको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसरी, भुक्तान अवधि अत्यन्त सरल छ। यो न केवल कम्पनीको लागि तर सम्बन्धित बैंकको लागि फायदेमंद छ। व्यापारको लागि आवश्यक अर्को लाभ अनुमोदन समय हो। प्रत्येक मामला मा आवश्यक पूंजी को प्रावधान एक छोटो समय मा जान सकिन्छ। यो एक साधारण ऋण मा एक महत्त्वपूर्ण लाभ हो। त्यस्तै गरी, यो एक वा बढी अर्डरको सट्टाको लागि एक महत्वपूर्ण कारक हो। किनकि निश्चित समय सञ्झ्यालमा बाँधिएको छ, एक द्रुत आदेश वित्तपोषण बिल्कुल आवश्यक छ।
क्रम को वित्तपोषण मा निष्कर्ष
अर्डर फाइनान्सिंग को समापन को रूप मा एक ठाँउ यहाँ स्थित हुन सक्छ कि यो एक आदर्श समाधान हो किनकि ठूलो परियोजनाहरु लाई एहसास गर्न को लागी जो धेरै महत्वपूर्ण लाभ पनि पैदा गर्न मा सक्षम हुन सक्छ। साथै, अवश्य, कम ब्याज दरहरू यहाँ हाइलाइट गर्न अनिवार्य छ। निस्सन्देह यी कम्पनीहरू सम्भवतः विचार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण तर्क हुन्। समान आवश्यक पूंजीको प्रावधानको लागि आवश्यक छोटो समयमा लागू हुन्छ। यो कारक कम ब्याज दरको रूपमा उच्च छ। किनकि द्रुत अर्डर फाइनान्सिङ बिना, इच्छित समय सन्झ्यालमा एक अर्डर बुझ्न सकिँदैन। यसले परिणामको लागि नेतृत्व गर्नेछ कि सम्बन्धित कम्पनीले प्रासंगिक क्रमलाई समयमै क्रमबद्ध गर्न सकेन र यसैले यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। यस कारणको लागि, मानक ब्याज दर संग ऋण वा ऋण यस मामला मा कम्पनीहरु को लागि आवश्यक सामान्य समय प्रश्न बाहिर छन्।
अघिल्लो लेखछुटकारा ऋण
अर्को लेखप्राथमिकता सूचना